musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Ramu ndiyo yako Brain Kudya, Doro, uye New York Lifestyle
Culinary • tsika nemagariro • dzidzo • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Waini & Midzimu
Kuva rum yakagadzirira
Ramu rinogona kuiswa muboka reFOOD, mushure mezvose - rakagadzirwa zvachose kubva muzvinhu zveshuga; inogona kutofungidzirwa senge dhizeti, nekuti inotapira. Nekudaro, iwo mweya uye wakaiswa pakati pezvinwiwa zvinodhaka zvine zvazvakanakira zvinosanganisira antibacterial properties, uye yakakurudzirwa kurapa strep huro.
Dzimwe ramu dzine hutano kupfuura dzimwe uye, rima rum, yakasara kusvika zera mune charred oak kana mapuranga emiti ichichipa iro rakasviba ruvara uye rakashinga kunaka, inoonekwa seinopa hutano antioxidants.
Kumwe kutsvagurudza kunoratidza kuti rum ine zvinhu zvinogona kubatsira kuchengetedza maseru ehuropi.
Zvinogona zvakare kudzikisa njodzi dzinosanganisirwa ne dementia uye Alzheimer's (David Friedman, Chikafu Sanity: Maitiro Ekudya muNyika yeMafashoni uye Fikisheni).
Chii chinonzi Rum?
Ramu inogadzirwa kubva nzimbe ne-zvigadzirwa senge mamorasi kana sirasi yenzimbe. Iyo shuga inodururwa kuita doro remvura pane akasiyana masimba uye iyo doro nevhoriyamu (ABV) inomhanya kubva ku40-80 muzana, ichiendesa angangoita 97 macalorie pa8 oz. pfuti ye80 proof (neCoke, wedzera imwe 88 macalorie). Hunhu hweramu hwakavakirwa pakuumbwa kwemamorasi, kureba kwekuvira, mhando yemapuranga anoshandiswa, uye kureba kwenguva yakashandiswa kuchembera mumabharani.
MaRamu akapatsanurwa neruvara (kureva, chena, dema / rima, goridhe, risingapfuure), kuravira (kureva. Rima rum rakakwegura kweanopfuura makore maviri+ mumabharaki emuouki akapiswa achigadzira dema / shava ruvara (isina kusefetwa zvichitevera kukwegura). Ndarama kana amber rum yakakwegura mumapara emouki emabharani kwenguva pfupi (mwedzi gumi nemisere). Karmeri inogona kuwedzerwa mushure mekukwegura kuti ipe yakajeka goridhe ruvara. White rum (inozivikanwa sesirivheri, mwenje kana kujekesa) inowanzo chengetwa mumidziyo yesimbi isina tsvina kana makaski uye vane makore gumi nemaviri nemafuta emarasha anoshandiswa kubvisa chero ruvara uye tsvina mushure mekukwegura uye ine kuravira kwakareruka kupfuura amber kana rima rums uye inowanzo kuwanikwa mumabikoji pane kudyiwa zvakashambidzika. Ramu yakasvinwa inopindirwa panguva yekusangana nesinamoni, aniseed, ginger, rosemary kana mhiripiri pazvikamu zvinosvika pa2 muzana. Spiced rum inowanzo kuve yakasviba muvara neshuga kana caramel dzimwe nguva inowedzerwa kutapira.
Rum rakabatana neHuranda, Kupandukira uye Kurwara
Kunyange ramu ichinaka uye ichisimudzira mapato uye barbeque, chinwiwa chine rima kumashure nyaya. Nhoroondo inobatanidza rum (payakarimwa paminda yenzimbe muzana ramakore rechi 17) kuenda kumuitiro wehuranda uko vanhu vaimanikidzwa kurima nekucheka nzimbe pasi pemamiriro anotyisa. Vashandi vakamanikidzwa kushanda vasinganeti kuvirisa nekusvibisa mamora kuita ramu iyo yaishandiswa semari kutenga vamwe varanda.
Pakutanga (uye kwemazana emakore anoverengeka), mhando yechigadzirwa yaifungidzirwa kuva murombo uye isingadhuri, ichinyanya kudyiwa nevaranda veminda yenzimbe uye inosangana nemapoka ezvehupfumi neepasi. Rum yakaitawo yakakosha nhoroondo munhoroondo yehondo chete inoitika muAustralia, iyo Rum Rebellion (1808), apo Gavhuna William Bligh akakundwa muchidimbu nekuda kwekuyedza kwake kubvisa kushandiswa kweramu senzira yekubhadhara.
Iko kutenderera kweAtlantic kutengeswa kwevaranda kwakamira muzana ramakore rechi19, zvisinei, huranda hwazvino unoenderera mberi (kureva., Maindasitiri ezvekurima uye emachira anopa macheni). Dhipatimendi reVashandi reUS rinoona kuti basa revana rakazara mukugadzirwa kwenzimbe munyika gumi nesere. Kune mamwe mapurazi, vashandi vanocheka nzimbe nemaoko pasi pekupisa kukuru vachigadzira njodzi dzehutano. Kutsvagisa kunoona kuti kupisa kunetseka kunogona kutungamira mukukudziridza kwechirwere chisingaperi uye chinowanzo kuuraya itsvo.
Market Data Forecast inoona kuti misika yepasi rose yerum inokosha US $ 25 bhiriyoni (2020) uye inofungidzirwa kuti ichakura kusvika US $ 21.5 bhiriyoni na2025. Pasi rose mari yegore rose kubva mukugadzirwa kweramu inofungidzirwa kuva US $ 15.8 bhiriyoni (2020) ine huwandu hwekufungidzira kukura ye7.0 muzana pa pamusoro pemakore mashanu-gore (5-2020) sezvo paine kuwedzera kwepasi rose kudiwa kweprimiyamu yemhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvemweya zvepamusoro zvine chekuita nezvechokwadi uye nemhando dzinozivikanwa.
IU.SA ndiyo mutengi mukuru weRamu neUS $ 2435 miriyoni inogadzirwa mumari (2020) uye mavhoriyamu ekutengesa echipiri chete kune vodka uye whisky muchikamu chemweya. Vagadziri vakuru veRum inyika dziri muLatin America neCaribbean; zvisinei, USA ine akawanda ekutanga-kumusoro mune ino chikamu pamwe nePhilippines, India, Brazil, Fiji neAustralia. Euromonitor International inowana kuti India inotungamira musika wepasi rose we rum.
Shanduko / zvinetswa zveRamu
Iyo nyowani rum chikamu inotongwa nezviuru zvemamirioni (vanhu vakazvarwa pakati pa1981 na1994 / 6) sezvo rum chiri chinwiwa chisingadhuri kana ichienzaniswa nemamwe mweya. Iyi misika yakanangwa ine simba rekushandisa uye inoratidza kuonga kwedoro ine rum runofarira (pamusoro pezvimwe zvinwiwa zvinodhaka). Nyika iri kumanikidza rum kushanduka sezvo vatengi vachitsvaga zvigadzirwa neshuga yakadzikira, izvo zvinogara zviripo, uye pamatanho eprimiyamu. Vagadziri veRamu vaunza zvigadzirwa zveRum zvitsva mumusika nemazamu ekuravira anotarisana nezvinwiwa zvinopa zvinotapira, bhotoro, caramel, michero yetropiki, uye manotsi evanilla ayo anowanzo kupera neutsiy licorice uye molasses.
Zvinogona kunge zvisiri ruzivo rwakajairika, asi mazhinji rum achiburitsa nyika dziri muCaribbean HAVAKURI yavo nzimbe uye vanounza nzimbe mbishi, muto wenzimbe kana mamorasi sehwaro hwavo uye zvinotengeswa kunze kwenyika zvinoumba matambudziko matsva munyika dzezvitsuwa izvi.
1. Molasses, a-chibereko cheshuga inogadzira yakachipa pane kushandisa nzimbe yakachena mukugadzira rum; zvisinei, sezvo kudikanwa kweshuga kuchiderera, kugadzirwa kweshuga kunodzikira saka kune mashoma mamora anowanikwa ekutengesa kunze. Kuderera kuri kuderera kunodzikisirawo pasi mutengo wenzimbe uye izvi zvinoshungurudza vagadziri veRum kuti vawane mamora anonyangarika zvachose apo varimi vanosiya nzimbe kuti vawane zvigadzirwa zvinobatsira zvekurima. Iko kune zvakare mukana wekuti hutano hwetsika hunokurudzira hurumende kana mamwe masangano anomiririra kumisikidza shuga-zvemukati miganho inokanganisa kuwanikwa kweshuga uye mutengo wechigadzirwa chapera.
2. Maitiro ekugadzira anogadzikana akakosha kune vatengi vezvinwiwa zvitsva sezvo vachishushikana kugutsa zvavanoda / zvavanoda pasina kukanganisa ramangwana. Kugadzirwa kweRamu kune mukurumbira wekugadzira zvakakwirira zvakatipoteredza nekuda kwenzvimbo inodiwa yekukura nzimbe, peturu yaida kuti igadzire kupisa kushandura nzimbe mbishi kuita svikiro rinovira uye huwandu hwemvura inoshandiswa mukugadzira pamwe nezviwanikwa zvinoshandiswa kavha. Kuzadzikisa zvido zvekusimudzira, indasitiri inofanirwa kufunga nezvenzira nyowani dzekushandisa zviwanikwa uye / kana kuchengetedza uye kugadzira mapakeji ayo anokwanisa kuora kana kuomarara kwezvakatipoteredza.
Kune makambani anoda uye anokwanisa kuenda kure, uye kugadzirisa zvido zvazvino, pane nhau dzakanaka sekuti vatengi vari kuda kubhadhara mitengo yemitengo yezvinhu zvitsva ne super-premium uye pamusoro pechikamu. Golden Rum yakagadzirira kuve inotevera inotevera maitiro muchikamu chemidzimu, nekutarisira kutengesa kuri kuwedzera ne33 muzana muna2021. Pamwero wekukura uyu, ichapfuura gin na2022 (internationaldrinkexpo.co.uk).
New York vanogamuchira Rum
Pane ichangopfuura yeManhattan-based Rum Congress, Federico J. Hernandez naTheRumLab vakaronga chirongwa chinonakidza uye chedzidzo pamwe chete ne-mu-munhu kuravira kwakawanda emarudzi epasi rose aifadzwa nemazana evarume shamwari nevateveri. Iwo matsva matsva anopa zviitiko zvekunzwa zvinosangana uye kazhinji zvinopfuura zvinotarisirwa.
Vanoda Groves, Maggies Farm Rum. Pittsburg, PA
Daniel Mora, Ron Centenario, Rum reCosta Rico
Ian Williams, Munyori, Rum: Iyo Yemagariro uye Inoshamwaridzana Nhoroondo yeMweya Chaiye wa1776
Iyo inotevera Rum Mutambo yakarongerwa Nyamavhuvhu 2021, San Francisco, CA. Kuti uwane rumwe ruzivo: californiarumfestival.com
Kathy Hove anoti:
Svondo 5, 2021 pa 13: 56
Zvinonzwika sesarudzo yakanaka kwandiri!